OpenSUSE Dzidzo ichanyangarika mushure mekuvhuraSUSE Leap 15 | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi mishoma yapfuura takaona kugoverwa kwedzidzo kwakatsakatika zvishoma nezvishoma kubva kuGnu / Linux mamiriro. Wekupedzisira kudonha aive Edubuntu asi panguva ino 2018 pachave nemamwe akawanda (zvinosuwisa). Kubva kuOpenSUSE timu isu takadzidza izvo OpenSUSE Dzidzo ichanyangarika nekuburitswa kwe openSUSE Leap 15.
OpenSUSE Dzidzo yakavakirwa paOpenSUSE Leap 42 uye nekudzokororwazve kwekuparadzirwa uku, hwema hwedzidzo huchanyangarika, kunze kwekunge Ruzhinji ruchida kuchengetedza kuravira kwepamutemo kwekuparadzira.
Iyo yepamutemo kuravira kweOpenSUSE ine zvinopfuura mazana mana nemakumi matanhatu emapakeji edzidzo, yakakwira nhamba yemapakeji inoda basa rakawanda pachikamu chevagadziri kuti vachengetedze uye nekudaro chimwe chezvikonzero chekuti chirongwa chisiirwe. Kunyangwe izvi, kugoverwa kuchasiiwa pachena kune Nharaunda uye zvichave kune iyo Nharaunda kusarudza kana kwete OpenSUSE Dzidzo inoenderera mberi.
OpenSUSE Leap 15 ichataridza kupera kweVhuraSUSE Dzidzo kana kutanga nyowani
Kuregererwa kwepamutemo kuchaitika kana OpenSUSE Leap 15 yaburitswa, saka kuchine mazuva kusvikira iyi nhau inosuruvarisa. Nguva yauchazofanira kusarudza kuti woenderera here kana kwete. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge chokwadi chakadai hachichadzoreke nekuti dai raive rakawanda basa reboka rebudiriro, izvi zvinoreva kuti OpenSUSE Dzidzo ine nharaunda diki uye zvingave zvakaoma kuwana boka revanhu vanotora yeiyo yepamutemo kuravira.
Kune rimwe divi, mhedzisiro yakaita saEdubuntu ndiyo inogona kunge iri chaiyo. Sezvinei, OpenSUSE ichachengetedzwa uyezve mushandisi wega wega achizoisa mapakeji avanoda, mapakeji ayo achachengetwa neanogadzira. Izvi zvichave mukana wakakura kune vazhinji vashandisi uye zvakare kune vanogadzira. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti zvichiri zvinosuwisa kuti mapurojekiti makuru senge OpenSUSE Dzidzo anonyangarika kana ane matambudziko mukusimudzira kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » OpenSUSE Dzidzo ichanyangarika mushure mekuvhuraSUSE Leap 15